PandaDoc: Mepụta, Zipu, Sochie, na eSign Akwụkwọ Ahịa | Martech Zone
PandaDoc: Mepụta, Zipu, Sochie, na eSign Akwụkwọ Akwụkwọ
Ịbụ onye onye na Salesforce gburugburu ebe obibi abụrụla ahụmahụ dị ịtụnanya, mana usoro mkparịta ụka maka imepụta, izipu, na imelite nkwupụta anyị nke ọrụ abụwo ọrụ dị ukwuu. Mgbe ụfọdụ, m na-eche na m na-etinye oge dị ukwuu n'ide ederede nke ọrụ karịa ka m na-arụ ọrụ ahụ n'onwe ya!
Ghara ikwu, ụlọ ọrụ ọ bụla nwere ụdị nke ya, ọkwa nke nkọwa dị mkpa, yana usoro maka ịmekọrịta na ịkwado akwụkwọ ahịa. Dị ka a ahịa na ọ bụghị a ahịa nnọchiteanya, M mgbe ịnụ ọkụ n'obi mgbe m ahịa otu na-ekwu, "Ndi ị na-ahụ na-agha ka mere otú m nwere ike izipu ya n'elu?".
PandaDoc: Akwụkwọ akpaaka Software
PandaDoc bụ ihe niile na-na-otu akwụkwọ akpaaka software na streamlines usoro nke na-eke, akwado, na eSigning amụma, ruturu, na contracts.
Na PandaDoc, azụmahịa uru -agụnye:
Mepụta akwụkwọ ahịa na obere oge - mepụta amụma ndị mara mma, nkwukọrịta mmekọrịta, ma ọ bụ nkwekọrịta na nkeji oge na nchịkọta ndọtị-na-dobe PandaDoc na ntinye otu pịa.
Anakọta eSignatures na atụmatụ ọ bụla - itinye aka na akpaaka na-eweta ma nweta ahụmịhe ndị ahịa na-enweghị ntụpọ maka ịnakwere atụmatụ ma ọ bụ ịbanye nkwekọrịta na ngwaọrụ ọ bụla.
Mee ka nnabata na mkparita uka di nfe - Kwado mmekorita ya na ndi nlebanye anya nke ime na nke ndi ozo site na nnabata nnabata, ntughari, nsuso uzo, na ikwu okwu.
Na Machị, PandaDoc malitere a free electronic mbinye aka ngwaahịa iji mee ka azụmahịa dị mfe inweta azụmahịa n'oge ọrịa COVID-19 na-egbo mkpa ngwa ngwa maka azụmahịa na-enweghị mmetụ. Ahịa ahụ zaghachiri site na iri puku kwuru ndebanye na iji ngwaahịa eme ihe na okpukpu abụọ nke ọnụego ya.
Na PandaDoc, ị nwere atụmatụ niile ị chọrọ site na ntinye site na nchịkọta:
Okwu - Mee ka usoro dị mfe iji mepụta amụma.
Quotes - Mepụta mmekọrịta, njehie na-enweghị njehie.
Nkwekọrịta - Mepụta nkwekọrịta ngwa ngwa na ndebiri akwadoro.
Ntinye - Chekwaa oge ma debe azụmahịa na eSignatures.
ịkwụ ụgwọ - Anakọta ịkwụ ụgwọ na mbinye aka iji kwụọ ụgwọ dịka obere ụbọchị abụọ.
Taa, ezughi oke ịnye eSignatures. A na-ahụ uru zuru ezu tupu, n'oge, na mgbe mbinye aka na arụmọrụ akwụkwọ, nghọta, ọsọ, na ahụmịhe onye ọrụ njedebe. Ahia achoghi ihe eji eme ihe. PandaDoc na-eduzi ahịa ahụ site na ilekwasị anya na ngwọta niile na-ejikọ ntinye aka na kọmputa yana ihe ndị ọzọ dị mkpa na-emepụta akwụkwọ akpaaka, ebe ọ na-aga n'ihu na-etinye ndị ahịa anyị mbụ.
Mikita Mikado, onye isi na onye isi ngalaba-PandaDoc
Ọzọkwa, PandaDoc na-enye njikọ maka sistemụ ndị ọzọ dị n'ime gị maka njikwa mmekọrịta ndị ahịa, njikwa kọntaktị, nchịkwa, ịgba ụgwọ, nchekwa, ma ọ bụ ịkwụ ụgwọ:
CRM - Salesforce & SalesforceIQ, Pipedrive, Hubspot, Zoho, ọla kọpa, Microsoft Dynamics, Zendesk Sell, Insightly, Nimble, SugarCRM, na Freshsales.
Ịkwụ ụgwọ - Stripe, PayPal, Authorize.Net, Square, na QuickBooks ịkwụ ụgwọ.
nchekwa - Google Drive, Igbe, na Dropbox.
PandaDoc na-enyekwa Single Banye (SSO - SAML 2.0) tinyere Okta, OneLogin, Microsoft Active Directory, Google Identity Platform na ndị ọzọ. Ha na-enyekwa ọtụtụ ole na ole Njikọ Zapier iwekota n'ebe ọ bụla ọzọ.
Debanye aha maka ule PandaDoc n'efu nke ụbọchị 14
Ngosi: Anyị bụ ndị mmekọ PandaDoc
Tags: nkwekọrịta nkwekọrịtankwekọrịta okikee-egosiesigniweịkwụ ụgwọ n'ịntanetịagbakaihe okikesee ihe okikeokwu nkona-acha uhie uhiena-edegharị nkwekọrịtankwenye ahịa na-agaakwụkwọ ahịa